NgoLwesihlanu, Novemba 2, 2012 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Nokuba uyazixabisa okanye awuzixabisi, uGoogle ungumnini webala lokudlala ekufuneka basebenze kulo abathengisi. Nokuba intengiso ihlawulwe kuGoogle okanye ukubekwa kwendalo kwinjini yokukhangela, usenokukujongela phantsi ukufikelela kuGoogle. Le infographic evela kwi-Wordstream ikubeka konke kwimeko.
ukusuka I-Wordstream's Google Facts Infographic: Uphando lwethu lwe-infographic lubandakanya ngaphezulu kwe-2,600 ii-akhawunti ze-AdWords ezisebenzisa i-AdWords Grader kwi-Q3 2012. Iiakhawunti xa zizonke zimelwe ngaphezulu kwe- $ 250 yezigidi kwinkcitho yonyaka. Sasinee-akhawunti ngeendlela ezahlukeneyo zokuchitha; ezinye iiakhawunti bezincinci kakhulu, zichitha ngaphantsi kweedola ezili-100 ngenyanga kwiAdWords. Ezinye zazinkulu kakhulu, ezinye zichitha ukuya kwizigidi ngenyanga kwi-AdWords. Uhlalutyo lujonge kwiiakhawunti kuwo onke amashishini, kwaye luvela kuwo onke amazwe apho uGoogle enza ushishino.
Idatha yale posti yebhlog yavela kufundo lwamva nje lweLizwi Amanani ewebhu kaGoogle, Esithatha esinye sezifundo ezibanzi kakhulu ekusebenzeni ngaphakathi kweNtengiso zikaGoogle ezakhe zaqhutywa.
tags: iintengiso zikaGoogleUgoogle ppcgoogle seoGoogle +uphando lwezinto eziphilayoHlawula ngokucofa kanyeenjini yokukhangela nounSEO
Nov 3, 2012 kwi-1: 32 AM
I-Thnks yolwazi lwe-infographics. Andilindelanga ukuba iwebhusayithi yokuthenga / ye-ecommerce iza kuqala. Into endiyilindeleyo kukuba i-ecommerce iza kuqala xa kuthelekiswa nomzi mveliso wokuhamba.